हिउँले ढकमक ढाकिएको मर्दी हाइ क्याम्प ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ६ चैत्र बिहीबार १३:११
हिउँले ढकमक ढाकिएको मर्दी हाइ क्याम्प !
पोखरा, चैत ६ गते । हिउँले ढकमक ढाकिएको मर्दी हाइ क्याम्प। कास्कीमा पर्ने मर्दी हाइ क्याम्प यति बेला हिउँले ढकमक ढाकिएको छ। पोखरादेखि हिउँ खेल्नकै लागि पनि मर्दी हाइ क्यामसम्म पर्यटक हेलिकप्टरबाट जाने गर्द्छ्न्। क्याम्पबाट मर्दी हिमाल, माछापुच्छ्रे हिमाल लगायतका सुन्दर हिमाल दृश्यहरु नजिक देख्न सकिन्छ। तस्वीर – राधिका कँडेल / रासस
सडक तथा हवाई यातायातमा यात्रुहरुको भीडभाड बढ्न थालेपछि संक्रमणको जोखिम
ढुंगेमा रहेको घलेगढी जहाँ विशाल ढुंगा, ढुंगाभित्र किल्ला !
पर्यटन मन्त्रालयले हप्तामा २ दिन बिदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने
खोटाङको ३ विमानस्थलमध्ये २ मा यही शनिबारदेखि नियमित उडान हुने
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस, दशैंमा लकडाउन हुन सक्ने !
PREVIOUS Previous post: जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्षमाथि कुटपिट !
NEXT Next post: शे–फोक्सुण्डोको साल्दाङ डोल्पामा सेताम्य हिउँ !